Fialan-tsasatra : Hanampy ny hafanana any Mahajanga ny « Star tour »
10/08/2018 admintriatra 0
Mafana ao anatin’ny hafanana. Taorian’ny tany Toamasina, dia hitohy ary hanampy ny hafanana any Mahajanga indray ny « Star tour ». Hetsika tafiditra ao anatin’ny fialan-tsasatra ary hotanterahina mandritra ny telo andro, ny 24 ka …Tohiny
Hira gasy makotrokotroka : Hitohy eny amin’ny tsenan’Anosibe
Miditra amin’ny andro faharoa. Taorian’ny fanokafana tetsy amin’ny kianjan’Ambohijatovo, dia hitohy eny amin’ny tsenan’Anosibe ny andiany faha-9 amin’ny fifaninanana hira gasy makotrokotroka. Ny alahady ho avy izao, dia hifandona amin’ireo singa mandrafitra ny hira gasy …Tohiny
AIZA NO ALEHA : Piment Café – Behoririka
Rock and folk entin’i Nini, Mahery ary Poon Mpanakanto samy manana ny mozika voiziny nefa atambatry ny aingam-panahy iraisana. Hampiantrano ny « Rock and folk » iarahana amin’i Nini (tarika Kiaka), Mahery (tarika Johary) ary …Tohiny
PM Ntsay Christian : Tsy mahavaha olana
Hanjakan’ny tsy fandriam-pahalemana ny faritra maro manerana an’i Madagasikara taorian’ny nanendrena ny Praiminisitra Ntsay Christian hitantana ny governemanta. Mitaraina noho izany ny vahoaka malagasy, satria sady tsy afa-miasa am-pilaminana no mitaintain-dava vokatry ny asan-dahalo sy …Tohiny
Firenena Mikambana : Manohana sy manampy an’i Madagasikara hatrany
Mandalo eto Madagasikara amin’izao fotoana izao ny talen’ny Bureau de Coordination des Affaires Humanitaires des Nations Unies (OCHA), John Ging. Nialohan’ny nihaonany mivantana tamin’ny Filohan’ny Repoblika sy ny praiminisitra, nanatanteraka fitsidihana ny minisitry ny Raharaham-bahiny ...Tohiny
Imbiky herilaza : « Raha hampilamina ny firenena dia azo ovaina ny lalàm-panorenana »